Ministeran’ny Indostria: Nanolorana fiarakodia “Karenjy”
mardi, 08 mai 2018 22:53
Nanolotra ireo fiarakodia « Karenjy – Mazana II » ireo, tamin’ny anaran’ny Fitondram-panjakana, ho an’ny Ministeran’ny Indostria sy ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Izao no natao, hoy ity farany, dia “ho fampandehanana misimisy kokoa ny asa sahanina eo anivon’ity departemanta ity. Ary nosafidiana ny “Karenjy” satria tafiditra ao anatin’ny politikan’ny Fitondrana ny fanjifana sy fampiroboroboana ny Vita Malagasy ».
« Ilaina ny mampiroborobo ny Vita Malagasy, ilaina ny manampy ny sehatra tsy miankina amin’ny fampiroboroboana ny toekarena, fa ilaina ihany koa ny mitsinjo lavitra, satria ny famokarana sy ny fanjifana ny Vita Malagasy ihany koa, dia ahafahana mampitombo ny harikarenantsika », hoy ny Praiminisitra.
« Tsy mena-mitaha amin’ny vita avy any ivelany ireto fiarakodia ireto », hoy hatrany ny Lehiben’ny Governemanta. Mampirisika ireo Ministera hafa mba hanjifa ny Vita Malagasy toy izany koa, hoy izy.
Antsirabe: Raikitra ny Z’OVY andiany faha-4 »